Seenaan Akkoo Manooyyee har’as waan hedduu nu barsiisaa!! – siifsiin
Jalqaba namoota gabaabaa lafarraa fixaa jettee murtii labsite. Akka yaada akkoo mannoyyeetti namoonni gabaaboon qaroodha. Yeroo adda addaatti yeroo isiin ajaja adda adaa ummatni akka raawwatan barbaaddu, namoonni gaggabaaboon ni mormuun. Dubbiin isaan injifachu hin dandeenne.
Kanaaf dubbiin isii akka nammoota qaroo kanaan akka jalaa hin fashaleefi. Walumaagalatti nama isii mormu waan hinbarbaanneef murtii kana fudhattee. Battaluma sanatti jaarsi gabaabaan tokko , “ mee waan isinii toluuf qabaa boolla keessatti nadhoysaa nahanbisaa jedhee.” namootta ajaja akkoo mannooyyee hojii irra oolchuutti jiran gaafatte. Isaanis tolee jedhanii jaarsa kana osoo hin ajjeesin hambisan.
Previous Previous post: Hibboo
Next Next post: Seenaa Gotaa Oromoo Garasuu Dhukii Kutaa Lamaffaa